ယောင်းတို့ အဝတ်ဘီရိုထဲမှာ ဘရာ ဘယ်နှစ်ထည် ရှိဖို့ လိုအပ်လဲ? - For her Myanmar
ဟိတ် မဆိုင်သူတွေ ဝင်မချောင်းကြေးနော်
နှင်းတို့အားလုံး ဘရာဝတ်ရတယ်။ ဟုတ်တယ်မလား? ဒါပေမဲ့ ဝတ်သာဝတ်နေရတာ ဘာကဘယ်ဘရာ၊ ဘယ်လိုမျိုးဝတ်ရင်တော့ ဘယ်အင်္ကျီနဲ့အဆင်ပြေတယ်၊ ကိုယ့်ဘီရိုထဲမှာတော့ ဘယ်နှစ်ထည်ရှိသင့်တယ်ဆိုတာမသိ တွေ့ကရာဆွဲဝတ်ပြီးပဲ နေကြတာကများတော့ ပုံစံလေးလှတာနဲ့ ဘရာကို ဆွဲဝယ်ထည့်လိုက်တာပဲ။ အဲ့တော့ အဝတ်ဘီရိုထဲမှာ ဘရာတွေသာအများကြီးရှိနေတာ ဝတ်ဖို့ကျတော့ အရောင်ရင့်ရတာနဲ့၊ အရာကြီးပေါ်နေရတာနဲ့ စသဖြင့်ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်လောက် ဖြစ်နေရောလေ။ ဆိုတော့ အရေအတွက်ပဲ များနေပြီး သုံးစားမရတွေ မဖြစ်ရလေအောင် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးလေးကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ တူတူဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင် ယောင်းရေ…
ဘရာတွေအကြောင်း ကိုယ့်ဘေးနားကလူတွေကို မေးလိုက်ရင်လည်း ‘ဝယ်နိုင်သလောက်သာစုထား၊ အမှားမရှိပါဘူး’လို့ ပြောကောင်းပြောနိုင်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းကျတော့ ဘရာ ၄ ထည်ပဲလိုအပ်တာပါနော်။ မျက်စိမမှားပါဘူး တကယ် ၄ ထည်ပါ 😛
(၁) ကြိုးပျောက်ဘရာကောင်းကောင်း တစ်ထည် (One nice strapless bra)
ပုံစံစုံ ဒီဇိုင်းစုံ အင်္ကျီတွေ၊ ပွဲတက်ဂါဝန်တွေ ပေါ်လာပြီဆိုတော့ ဘရာကြိုးကြီး ပြူးပြဲပြီးပေါ်နေရင်လည်း မလှ၊ မဝတ်လို့ကလည်း မရပြန်ဘူးလေ။ အဲဒီလိုမျိုး ဘေးကျပ်နံကျပ်ကိစ္စတွေအတွက်တော့ ကြိုးပျောက်ဘရာဆိုတာ မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်တယ်မလား။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုဘရာ ကောင်းကောင်းတစ်ထည်ကတော့ မရှိမဖြစ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။
Related Article >>> ဘီကီနီကို ဘယ်သူထွင်?
(၂)ကိုယ်နဲ့ကောင်းကောင်းတော်မယ့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့အချိန် ဝတ်တဲ့ဘရာ (One sports bra that actually fit)
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရင်သားတွေ ခုန်မနေအောင် ထိန်းပေးမယ့် ဘရာကောင်းကောင်းတစ်ထည်ကလည်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်နော်။ (အကယ်၍ ကိုယ်က နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ထည်ထက်ပိုပြီး ဝယ်ထားပေါ့နော်။) ချွေးစော်နံနေတဲ့ ဘရာကိုထပ်ထပ်ပြီးတော့ မဝတ်ချင်လောက်ဘူးမလား။
(၃) နေ့စဉ်ဝတ် ဘရာနှစ်ထည် (Two everyday bras)
အရောင်ကြောင်ကြောင်ကျားကျားနဲ့ ပေါက်ကရတွေ မဟုတ်ဘဲ အသားရောင်တစ်ထည်၊ အနက်ရောင် တစ်ထည်လောက်ဆို ဖြစ်ပါပြီ။ (လှည့်ပြီးတော့ ဝတ်ပေါ့လေ။ မဟုတ်ရင် ဟောင်းသွားမှာပေါ့။) အဓိကကတော့ အဲဒီဘရာနှစ်ထည်က ဝတ်ရတာအဆင်ပြေပြီး နေ့စဉ်ဝတ်နေကျတွေဖြစ်တဲ့ တီရှပ်တို့၊ ရှပ်တို့ နဲ့တွဲဝတ်လို့ရတဲ့ ဘရာမျိုးဖြစ်ရပါမယ်။ ဒါမှတစ်နေ့လုံး ယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ သွားလာနေလို့ရမှာပေါ့။
Related Article >>> အကြောပြတ်လို့ ရေကူးဝတ်စုံ မဝတ်ရဘူးတဲ့လား
တကယ်တမ်း မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာတော့ ဒီ ၄ ထည်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်သွားလာရတဲ့ နေရာ၊ ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားနဲ့ တခြားအခြေအနေတွေ အပေါ်မူတည်ပြီး ထပ်ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်။ (ဥပမာ နောက်ကျောပြောင် အင်္ကျီတွေဝတ်မယ်ဆိုရင် ထိပ်ကပ်ဘရာ (nipple tape) တို့ ကြိုးအောက်စည်း ဘရာတို့ စသဖြင့် ထပ်ဝယ်ရပါမယ်။) အရေးကြီးတာက ဘယ်ဘရာပဲဝတ်ဝတ် ကိုယ်နဲ့သင့်တော်တဲ့ ဆိုဒ်ကို ရွေးချယ်ပြီး ဝတ်ဖို့ပါပဲ။
References : liveabout, zivame
ဟိတျ မဆိုငျသူတှေ ဝငျမခြောငျးကွေးနျော
နှငျးတို့အားလုံး ဘရာဝတျရတယျ။ ဟုတျတယျမလား? ဒါပမေဲ့ ဝတျသာဝတျနရေတာ ဘာကဘယျဘရာ၊ ဘယျလိုမြိုးဝတျရငျတော့ ဘယျအင်ျကြီနဲ့အဆငျပွတေယျ၊ ကိုယျ့ဘီရိုထဲမှာတော့ ဘယျနှဈထညျရှိသငျ့တယျဆိုတာမသိ တှကေ့ရာဆှဲဝတျပွီးပဲ နကွေတာကမြားတော့ ပုံစံလေးလှတာနဲ့ ဘရာကို ဆှဲဝယျထညျ့လိုကျတာပဲ။ အဲ့တော့ အဝတျဘီရိုထဲမှာ ဘရာတှသောအမြားကွီးရှိနတော ဝတျဖို့ကတြော့ အရောငျရငျ့ရတာနဲ့၊ အရာကွီးပျေါနရေတာနဲ့ စသဖွငျ့ပွဿနာပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျလောကျ ဖွဈနရေောလေ။ ဆိုတော့ အရအေတှကျပဲ မြားနပွေီး သုံးစားမရတှေ မဖွဈရလအေောငျ ရညျရှယျပွီး ဒီဆောငျးပါးလေးကို ရေးဖွဈသှားတာပါ။ တူတူဆကျဖတျကွညျ့ရအောငျ ယောငျးရေ…
ဘရာတှအေကွောငျး ကိုယျ့ဘေးနားကလူတှကေို မေးလိုကျရငျလညျး ‘ဝယျနိုငျသလောကျသာစုထား၊ အမှားမရှိပါဘူး’လို့ ပွောကောငျးပွောနိုငျပမေဲ့ တကယျတမျးကတြော့ ဘရာ ၄ ထညျပဲလိုအပျတာပါနျော။ မကျြစိမမှားပါဘူး တကယျ ၄ ထညျပါ 😛
(၁) ကွိုးပြောကျဘရာကောငျးကောငျး တဈထညျ (One nice strapless bra)
ပုံစံစုံ ဒီဇိုငျးစုံ အင်ျကြီတှေ၊ ပှဲတကျဂါဝနျတှေ ပျေါလာပွီဆိုတော့ ဘရာကွိုးကွီး ပွူးပွဲပွီးပျေါနရေငျလညျး မလှ၊ မဝတျလို့ကလညျး မရပွနျဘူးလေ။ အဲဒီလိုမြိုး ဘေးကပျြနံကပျြကိစ်စတှအေတှကျတော့ ကွိုးပြောကျဘရာဆိုတာ မရှိမဖွဈကို လိုအပျတယျမလား။ ဆိုတော့ အဲဒီလိုဘရာ ကောငျးကောငျးတဈထညျကတော့ မရှိမဖွဈကို လိုအပျပါတယျ။
Related Article >>> ဘီကီနီကို ဘယျသူထှငျ?
(၂)ကိုယျနဲ့ကောငျးကောငျးတျောမယျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့အခြိနျ ဝတျတဲ့ဘရာ (One sports bra that actually fit)
လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျနတေဲ့အခြိနျမှာ ရငျသားတှေ ခုနျမနအေောငျ ထိနျးပေးမယျ့ ဘရာကောငျးကောငျးတဈထညျကလညျး မရှိမဖွဈ လိုအပျပါတယျနျော။ (အကယျ၍ ကိုယျက နတေို့ငျးလကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတယျဆိုရငျတော့ တဈထညျထကျပိုပွီး ဝယျထားပေါ့နျော။) ခြှေးစျောနံနတေဲ့ ဘရာကိုထပျထပျပွီးတော့ မဝတျခငျြလောကျဘူးမလား။
(၃) နစေ့ဉျဝတျ ဘရာနှဈထညျ (Two everyday bras)
အရောငျကွောငျကွောငျကြားကြားနဲ့ ပေါကျကရတှေ မဟုတျဘဲ အသားရောငျတဈထညျ၊ အနကျရောငျ တဈထညျလောကျဆို ဖွဈပါပွီ။ (လှညျ့ပွီးတော့ ဝတျပေါ့လေ။ မဟုတျရငျ ဟောငျးသှားမှာပေါ့။) အဓိကကတော့ အဲဒီဘရာနှဈထညျက ဝတျရတာအဆငျပွပွေီး နစေ့ဉျဝတျနကေတြှဖွေဈတဲ့ တီရှပျတို့၊ ရှပျတို့ နဲ့တှဲဝတျလို့ရတဲ့ ဘရာမြိုးဖွဈရပါမယျ။ ဒါမှတဈနလေုံ့း ယုံကွညျမှုရှိရှိနဲ့ သှားလာနလေို့ရမှာပေါ့။
Related Article >>> အကွောပွတျလို့ ရကေူးဝတျစုံ မဝတျရဘူးတဲ့လား
တကယျတမျး မရှိမဖွဈ လိုအပျတာတော့ ဒီ ၄ ထညျပါပဲ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျသှားလာရတဲ့ နရော၊ ဝတျတဲ့အဝတျအစားနဲ့ တခွားအခွအေနတှေေ အပျေါမူတညျပွီး ထပျဝယျလို့ရပါတယျနျော။ (ဥပမာ နောကျကြောပွောငျ အင်ျကြီတှဝေတျမယျဆိုရငျ ထိပျကပျဘရာ (nipple tape) တို့ ကွိုးအောကျစညျး ဘရာတို့ စသဖွငျ့ ထပျဝယျရပါမယျ။) အရေးကွီးတာက ဘယျဘရာပဲဝတျဝတျ ကိုယျနဲ့သငျ့တျောတဲ့ ဆိုဒျကို ရှေးခယျြပွီး ဝတျဖို့ပါပဲ။
Tags: bra, Everyday, of, Sports, Strapless, Types
Hnin Ei Oo November 26, 2018
Stella March 13, 2019
Hnin Ei Oo January 7, 2019
Christina Rosy December 10, 2018
Hnin Ei Oo November 27, 2018